Ukukhanya kotyando, itafile yokuSebenza, isiHlomelo seNyango- iWanyu
Amava eminyaka eli-16
Iimveliso ezingaphezu kwe-60
Umthengisi wegolide: 13
Ukukhanya kwesitalato i-LED
Intshayelelo I-LEDD500 / 700 ibhekisa kukukhanya kwesibhedlele esibhedlele kabini se-dome. Isibhedlele sokukhanya kwezonyango esibhedlele senziwe ngealuminium aluminium enepleyiti engqindilili yealuminium ngaphakathi, eluncedo kakhulu ekutshisweni kobushushu. Ibhalbhu yibhalbhu yeOSRAM, tyheli namhlophe. Iscreen sokuchukumisa iLCD sinokulungisa ukukhanya, ubushushu bombala kunye neCRI, zonke ezihlengahlengiswayo kumanqanaba alishumi. Ingalo ejikelezayo isebenzisa ingalo ye-aluminium engasindiyo ekubekeni ngokuchanekileyo. Zintathu iindlela onokukhetha kuzo kwiingalo zentwasahlobo, ...
Intshayelelo i-LEDD620 / 620 ibhekisa kwindlu yangaphakathi ephindwe kabini ukukhanya kokusebenza kwezonyango. Imveliso entsha, ephuculweyo ngokwesiseko semveliso yokuqala. IAluminiyam ingxubevange iqokobhe, uhlaziyo lwangaphakathi oluphuculweyo, isiphumo sokuhambisa ubushushu esingcono. Iimodyuli zezibane ze-7, ii-bulbs ezingama-72 zizonke, imibala emibini emthubi namhlophe, iibhalbhu ezikumgangatho ophezulu ze-OSRAM, ubushushu bombala 3500-5000K uhlengahlengiso, i-CRI ngaphezulu kwe-90, ukukhanya kungafikelela kwi-150,000 Lux. Iphaneli yokusebenza yiLCD yokuthinta isikrini, ukukhanya, umbala ...
Ukukhanya kwelanga lokukhanya kwe-LED ...
Intshayelelo i-LEDD730740 ibhekisa kuhlobo oluphindwe kabini lwe-petal ukukhanya kwezonyango. Kwigumbi lokusebenza ngebhokisi yokuhlanjululwa, uhlobo lwepetal lunokuthintela ukuthintela ukuhamba komoya kwaye linciphise iindawo ezinesiphithiphithi ekuhambeni komoya ombi. Ukukhanya kwe-LEDD730740 kabini kunika ukukhanya okungaphezulu kwe-150,000lux kunye nobushushu obuninzi bombala we-5000K kunye ne-CRI yama-95. Umqheba wenziwe ngezinto ezintsha, resistan ...
Intshayelelo I-LEDD500700C + M ibhekisa kwigumbi lokusebenzela elikhanyayo eliphindwe kabini le-LED. Inkqubo yekhamera eyakhelweyo kunye nokujonga iliso elingaphandle kunokusetyenziselwa injongo yoqeqesho. Inika amandla ukujonga kunye nokurekhoda ukusebenza. Faka isicelo ku-■ esiswini / kuqhaqho jikelele ■ izifo zamanina ngesinye iseti ...
TS Manual fracturing Su ...
Intshayelelo TS itafile ngesanti kubunzulu baphantsi sui ...
TDY-1 China Umbane M ...
Intshayelelo TDY-1 itafile yokusebenza yombane ado ...
I-TDY-Y-1 yeenjongo ezininzi ...
Intshayelelo TDY-Y-1electric hydraulic operatin ...
FD-G-2 China Umbane ...
Intshayelelo FD-G-2 itafile yokubelekisa e ...
TS-D-100 kabini Electr ...
Intshayelelo TS-D-100 ibhekisa kwingalo kabini elec ...
Intshayelelo TS-DQ-100 ibhekisa kwingalo ephindwe kabini ele ...
Intshayelelo QF-JX-300 ibhekisa kwi-ICU br ...
Intshayelelo TD-TS-100 ibhekisa kunyango oludibeneyo ...
Ngaba ilayini yokuSebenza yokuKhanyisa ayinakufakwa kwigumbi OKANYE elinemigangatho ephantsi yomgangatho?
Kwiminyaka emininzi yokuthengisa kunye namava emveliso, sifumanise ukuba abanye abathengi bayabhideka xa bethenga ukukhanya kokusebenza. Ukukhanya kwesibane sokusebenza, ukuphakama kobude obufanelekileyo ziimitha ezi-2.9. Kodwa eJapan, Thailand, Ecuador, okanye ezinye ...
Xa abathengi bamanye amazwe besithi andikaze ndithenge ukukhanya kwakho kokusebenza, ngaba umgangatho wayo unokuthenjwa? Okanye ukude kakhulu kum. Kufuneka ndenze ntoni xa kukho ingxaki esemgangathweni? Zonke iintengiso, ngeli xesha, ziya kukuxelela ukuba iimveliso zethu zezona zibalaseleyo. Kodwa ngaba uyakholelwa ngokwenene? Njengengcali ...